सपिङ मलहरूमा छुटको प्रतिस्पर्धा - आजकोNepal
४ माघ २०७८, मङ्गलबार
सपिङ मलहरूमा छुटको प्रतिस्पर्धा
संवाददाता २७ असोज २०७८, 9:55 am
काठमाडौं, २७ असोज । चाडपर्वको अवसर पारेर नाम चलेका सपिङ मलहरूबीच छुट दिन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । दसैं सुरु भएसँगै सपिङ मलहरूमा ग्राहकहरूको भीड पनि छ । यही भीडलाई आकर्षित गर्न सपिङ मलहरूले सामान खरिदमा छुट अफर राखेका हुन् ।
उपत्यकाभित्रका केएल टावर, सिभिल मल, बीजी मललगायत सपिङ मलहरूले दसैं तिहार विशेष छुट योजना ल्याएका छन् । जसअनुसार लत्ताकपडा, घरेलु सामानलगायतको खरिदमा ग्राहकहरूले सिनेमाको टिकट, सपिङ भौचर, टीभी, फ्रिज, मिक्स्चर, ग्राइन्डर, मोटरसाइकल, स्कुटर र टुर प्याकेजको सुविधा तथा उपहार पाउन सक्ने छन् ।
चाबहिलस्थित केएल टावरले चाडपर्वलक्षित ‘टीभीएस रमाइलो दसैं तिहार’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहारहरू पाउने छन् । बम्परमा एक जनाले टीभीएस अपाची आरटीआर १६० टुभी पाउने संयोजक हीरामणि तिमिल्सिनाले बताए ।
‘दैनिक उपहार योजनाअन्तर्गत एक जोडीले सिनेमा हलको टिकट, हजार रुपैयाँ बराबरको सपिङ भौचर र उपहारहरू पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘साप्ताहिक विजेताले सीजीका होम अप्लाइन्सेस, टीभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, आइरन, हिटर, भ्याकुम क्लिनरलगायत उपहार पाउने छन् ।’ यी योजनामा सहभागी हुन कम्तीमा हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गर्नुपर्नेछ ।
गोंगबुस्थित बीजी मलले दसैंमा घरमा जानेहरूलाई लक्षित गर्दै ‘फ्यान्टास्टिक दसैं तिहार’ योजना ल्याएको छ । योजनाअनुसार ५० भन्दा बढी आउटलेटहरूले आफ्ना सामग्रीमा ३०–४० प्रतिशत छुट दिएको बीजी मलका समेत संयोजक रहेका तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
‘बालबालिकादेखि बूढापाकासम्मका कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलमा छुट दिइएको छ,’ उनले भने, ‘मलभित्र सपिङ गर्दा ग्राहकहरूले १२५ सीसीको टीभीएस एनटर्क स्कुटर र अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू उपहारमा पाउने छन् ।’
सुन्धारामा रहेको सिभिल मलले मोटरसाइकल जित्न सकिने योजना ल्याएको छ । दसैंतिहारमा किनमेल गर्ने ग्राहकले बम्परमा टीभीएस अपाची आरटीआर १६० टुभी मोटरसाइकल जित्न सकिने योजना रहेको मलका मार्केटिङ म्यानेजर अमिर ठकुरीले बताए । ‘ग्राहकहरूले इलेक्ट्रोनिक्स सामान, ट्राभल प्याकेज, गिफ्ट भौचर समेत पाउने योजनामा छ,’ उनले भने, ‘हरेक साता एक जनालाई १० हजार रुपैयाँको नगद भौचर दिइनेछ । साथै मलमा सामान किन्नेले ७० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् ।’
हरेक साता एक जोडीलाई दुई रात तीन दिनको बसाइसहित पोखरा राउन्ड ट्रिपको व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । ‘साथै एक जनाले टीभीएस एनटर्क स्कुटर जित्न सक्छन्,’ उनले थपे, ‘यसका लागि सिभिल मलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब च्यानललाई फलो गर्नुपर्नेछ ।’ मलमा हजार रुपैयाँभन्दा बढीको किनमेल गर्ने मात्रै यो योजनामा सामेल हुन सक्ने उनले बताए ।
होम एप्लाइन्सस, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, लत्ताकपडालगायत सबै सामान एकै स्थानमा पाइने भएकाले किनमेल गर्न सपिङ मलमा उपभोक्ताहरूको भीड लाग्ने गर्छ । कतिपयलाई छुट तथा उपहार योजनाले पनि किनमेलका लागि मलसम्म पुर्‍याउँछ ।
यही तथ्यलाई ध्यानमा राखी ललितपुरको पुल्चोकस्थित लबिम मलले पनि दसैंमा छुट योजना ल्याएको छ ।
मलले उपभोक्ता लक्षित विभिन्न सामग्रीहरूमा छुट अफरहरू राखिएको जनाएको छ । उपत्यकाका अन्य मलका आउटलेटहरूले पनि आफ्ना नयाँ सामानहरूमा १०–१५ प्रतिशत छुट र पुराना सामानहरूमा सेल अफर राखेका छन् । उपत्यकामा यस्ता मलहरू दुई दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
२० देशमा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’, नेपालमा पनि थालियो…
सर्वोच्चमा आजदेखि गोलाप्रथा
प्रहरी नियमावली संशोधन : एकै पटक साढे १७ हजार प्रहरीको…
एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनौं : नारायणकाजी श्रेष्ठ
1 महिना अगाडि
पछिल्लो २४ घण्टामा २१३ मा कोरोना संक्रमण, ३१५ जना निको,…
सौराहामा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र शुरु
प्रदेशहरूले विकास खर्च गर्न सकेनन्
काठमाडौं, १५ मंसिर । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट विश्वका विभिन्न २० देशमा देखिएको रिपोर्ट बाहिर आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा सबैभन्दा पहिला रिपोर्ट भएको यो भेरियन्टका…
काठमाडौं, १५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतमा आज (बुधबार) देखि गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयन हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै न्यायाधीशले नै गोला तानेर इजलास र पेसी तोक्ने अभ्यास…
काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर सिर्जना गरिएका वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पदमा एकैपटक १७ हजार पाँच सय १७ प्रहरी बढुवा…
पोखरा, ११ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् ।…
चितवन, ११ मंसिर । नेकपा (एमाले) को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्द सत्र सचितवन सौराहामा शुरु भएको छ । निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो गरी बन्द…
त्रिनेत्र मिडिया प्रा. लि.
बुटवल , रुपन्देही
दर्ता नं: २४५ १४५
ईमेल : ajakonepal1@gmail.com
सम्पर्क : ९८६७१४७७५२ , ९८६७२५०७७३
बिज्ञापनका लागि सम्पर्क : ९८६७२५०७७३
हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस
Twitter मा फलो गर्नुहोस
Instagram मा फलो गर्नुहोस
प्रधान सम्पादक : मोनिका भट्टराई
संरक्षक : बिन्ध्याकेसर जोशी
प्र .का .अ : नवराज पराजुली
निर्देशक तथा संरक्षकसन् : बसन्त चौधरी
क . सचिब :वृन्दा भट्टराई
कानुनी सल्लाहकार : प्रतिक भण्डारी
मल्टिमिडिया : अबि खरेल
Copyright © 2021 - Trinetra Media Pvt Ltd - All Rights Reserved.
Developed By Eagle Eye Technology